OTU ESI EDOZI AHA NA EXCEL - EXCEL - 2019
Mmemme Microsoft Excel: nkwụnye nkụzi
Ekepụtara isiokwu ndị a ruo ogologo oge, ma ọ bụ iji zie ezi, azụ n'afọ 1895, mgbe a mụrụ nanị fim. A na-eji ha eme ihe nkiri vidio - ọ bụ ihe doro anya mere kpọmkwem - mana ọbịbịa nke ihe nkiri, ọ dịghị ihe gbanwere. Ihe ị ga-ekwu banyere ya, ma ọ bụrụ na 2017 na ngwanrọ YouTube kachasị mma, otu isiokwu ndị ahụ bụ otu, nke a ga-atụle n'ihu.
Kwado ma ọ bụ gbanyụọ ndepụta okwu
N'ezie, iji mee ka ndepụta okwu na vidio na YouTube dị mfe, dị mkpa ka ị pịa akara ngosi kwekọrọ.
Iji kpochapụ, ịkwesịrị ịmegharị otu ihe - pịa ọzọ na akara ngosi ahụ.
Mkpa: Ngosipụta nke akara ngosi gị nwere ike ịdị iche na ihe egosiri na mbido ahụ. Akụkụ a na-adabere na ọnọdụ ala na mbipute mmelite nke akụ n'onwe ya. Otú ọ dị, ka ọ dị ugbu a, ọnọdụ ya agbanwebeghị.
Nke ahụ bụ na ị mụtara otú ị ga-esi mee ka ị gbanyụọ ma ọ bụ gbanyụọ ndepụta okwu na vidiyo. Site n'ụzọ, n'otu ụzọ ahụ, ịnwere ike ịgbanwuo ngosipụta nke sabs akpaghị aka na YouTube, na ihe ọ ga-akọwa n'ụzọ zuru ezu n'ọdịnihu na ederede.
N'ozuzu, nkwụnye aka na-adịkarị ka ndị na-abụghị akpaka (akwụkwọ ntuziaka). Dị ka o si dị mfe ịkọ nkọ, ọrụ YouTube n'onwe ya na-ekepụta ndị mbụ ya, ya na aka ya site n'aka onye na-ede vidio. N'ezie, n'adịghị ka mmadụ, videoless soul video hosting algorithms na-achọkarị imehie ihe, si otú ahụ na-agbagha ihe niile edere na vidiyo ahụ. Ma ọ ka dị mma karịa ihe ọ bụla.
Site n'ụzọ, ị nwere ike ịkọwa ndepụta okwu akpaaka ọbụna tupu i mee ka vidiyo ahụ. Naanị ịkwesịrị ịpị akara ngosi akara na ihe ọkpụkpọ na menu họrọ ihe ahụ "Nkọwa okwu".
Na windo ahụ egosipụtara, a ga-egosi gị ụdị asụsụ dị iche iche nke ụda ma gosipụta nke n'ime ha na-akpaghị aka na nke na-abụghị. N'okwu a, enwere otu nhọrọ - Russian, ozi nke na-agwa anyị na e kere ha na-akpaghị aka. Ma ọ bụghị, ọ gaghị adị adị.
Ị nwekwara ike ịlele ihe ederede niile n'otu oge. Iji mee nke a, n'okpuru vidiyo, pịa "More", na na ọnọdụ onodu, họrọ "Ederede ederede".
Na n'ihu gị ihe niile ederede na vidiyo ga-apụta. Ọzọkwa, ị nwere ike ịhụ nke abụọ onye edemede na-akpọ otu ahịrịokwu, nke dị mfe ma ọ bụrụ na ị na-achọ ebe kpọmkwem na vidiyo.
Dị ka nsonaazụ ya pụta, m ga-achọ ịma na agbanyeghị akpaka dị nnọọ mkpa. Na vidio ụfọdụ, edere ha na nke a na - edezi, na ụfọdụ - ntụgharị ihu. Ma nke a bụ nkọwa ezi uche dị na ya. A na-eji ihe ndị dị otú ahụ eme ihe site na iji ngosipụta olu, ihe omume ahụ na-eme ya ozugbo. Ma oburu na edoziri olu nke dike nke vidio, ihe omuma ya doro anya na ide ya onwe ya bu oke zuru oke, mgbe ahu edeputara ndi mmadu dika ihe zuru oke. Ma oburu na enweghi nkiti na ihe edere, oburu na otutu ndi mmadu na ekwu okwu n'otu ugbua, na n'ozuzu ihe ngbasi na aga n'ihu, mgbe enweghi usoro ihe no n'ime uwa nwere ike ide ederede maka ahia.
Ihe mere ederede akpaghị aka
Site n'ụzọ, na-ekiri vidiyo na YouTube, ị nwere ike ịhụ na ọ bụghị ndị niile nwere ederede, ọ bụghị akwụkwọ ntuziaka, kama ọbụna ndị akpọrọ. Enwere nkọwa maka nke a - ha anaghị emepụta ma ọ bụrụ:
oge nke vidiyo a dị ogologo - ihe karịrị 120 nkeji;
ọ bụghị usoro ahụ ka a na-amata asụsụ vidiyo ahụ, na ebe a Youtube nwere ike ịmata Bekee, French, German, Spanish, Portuguese, Dutch, Italian, Korean, Japanese, and Russian;
ọ dịghị okwu mmadu na nkeji mbụ nke ndekọ;
ogo dị mma nke na usoro ahụ enweghị ike ịmata okwu ahụ;
ọtụtụ ndị na-ekwu otu oge mgbe ị na-edekọ.
N'ozuzu, ihe mere ị ga-eji lelee ihe e kere eke site na YouTube bụ ihe ezi uche dị na ya.
N'ihi ya, anyị nwere ike ikwu otu ihe - ndepụta okwu na vidio na YouTube dị ezigbo mkpa. E kwuwerị, onye ọrụ ọ bụla nwere ike inwe ọnọdụ dị otú ahụ mgbe ọ na-apụghị ịnụ ụda nke ndekọ ahụ ma ọ bụ na ọ gaghị ama asụsụ a na-ekwu na vidiyo ahụ, nke ahụ bụ mgbe ndepụta okwu ga-enyere ya aka. Ọ dị mma na ndị mmepe na-elekọta eziokwu ahụ bụ na ọ bụ onwe ha kere ha, ọ bụrụgodị na onye edemede ahụ echeghị ịtinye ha.
https://termotools.com ig.termotools.com © Excel 2019